FADHIGII MAANTA EE WAKIILADA OO ANSIXIYAY QODOBO KHUSEEYA DOORASHADA MADAXTOOYADA EE 29 MARCH | Toggaherer's Weblog
Hargeysa 22 Feb 2009 ToggaHerer
Xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay cod aqlabiyada ah ku ansixiyeen goaan gole oo ka kooban saddex qodob oo kala ah .
1- In doorashadu ku qabsoonto wakhtigii loo qoondeeyey ee 29 March.
2- Hadii ay doorashadu ku qabsoomi waydo wakhtigeedii in labada gole guurtida iyo baarlamaan ay isaga yimaadaan fadhi wada jir ah oo ay kaga tashanayaan talaabada la qaadayo iyo cidii gaadhsiin lahayd dalka doorasho xor ah oo xaala .
3-In Komishanka doorashooyinka qaranka loo yeedho si wax looga waydiiyo halka ay marayso tabaabushaha doorashdu.
Goaankan ay xildhibaanda golaha wakiiladu ansixiyeen ayaa ka dambeeyey kadib markii uu soo gabagabeeyey dood uu golu ka yeeshay mooshin ahayd qabsoomida doorashooyinka madaxtooyada waqtigii loo qoondeeyey doodaasi oo lagu soo gabagabeeyey goankan ay goluhu maanta ku ansixiyen fadhigoodii ay yeesheen.
Fadhigii golaha wakiilada oo uu guddoominayay Guddoomiye ku xigeenka Labaad Mudane Baashe Maxamed Faarax(Samaale) oo ay madasha ku sugnaayeen 47 mudane waxa guaanka cod aqlbiyad ah oo gacan taaga ku ogolaaday 35 Mudane, 5 Mudane ayaa diiday, 6 way ka aamuseen guddoomiye ku xigeenkuna oo shirka gudoominayeyna muu codayn.
Goaankan goluhu ku ansixiyey fadhigoodii maanta ayaa la filayaa in ay wax wayn ka tarto dareemo iyo cabsi baryahanba laga qabay in ay dib u dhac ku yamaado qabsoomida doorashada madaxtooyda .
Warqabadka ToggaHerer Hargeysa Somaliland